Xulka Spain Oo Iska Xaadiriyay Semi-final-ka Euro 2020 Kadib Markii Ay Rikoodhayaal Ku Garaaceen Xulka Switzerland – Kooxda.com
HomeEURO 2020Xulka Spain Oo Iska Xaadiriyay Semi-final-ka Euro 2020 Kadib Markii Ay Rikoodhayaal Ku Garaaceen Xulka Switzerland
Xulka Spain Oo Iska Xaadiriyay Semi-final-ka Euro 2020 Kadib Markii Ay Rikoodhayaal Ku Garaaceen Xulka Switzerland
Xulka Qaranka Spain ayaa iska xaadiriyay Semi-final-ka tartanka Euro 2020 kadib markii ay rikoodhayaal uga badiyeen xulka Switzerland kulan xiiso lahaa.
Xulka Spain ayaa ciyaarta ku bilowday si dar-dar leh xilli xulka Switzerland difaac ku bilowday ciyaarta xilli xulka Spain doonayay in iska ilaaliyo lama filaan uga yimaada kulanka.
Daqiiqadii 8-aad ayuu xulka Spain dhaliyay goolka 1-aad kadib markii uu xiddiga Switzerland ee Denis Zakaria si khaldan goolkiisa uga dhaliyay hogaanka u dhiibay xulka Spain.
Kadib goolkaas xulka Switzerland ayaa ka baxay difaaca waxana ay bilaabeen in ay weerar qaadaan si ay u dhaliyaan goolka bar-baraha halka uu Xulka Spain maamulayay ciyaarta laakiin ku dhibaatooday goolka hortiisa.
Xulka Switzerland Ayaa helay fursado fiican oo ay goolal ku dhalin karaan laakiin uma suurtagalin arintaas xilli uu xulka Spain dhankiisa ku dhibaatooday in ay gool dhaliyaan inkasta oo ay sameeyeen fursado fiican.
Waxa sidaas ku dhamaatay qaybta hore ee ciyaarta oo uu xulka Spain natiijo ahaan hogaaminayo ciyaarta laakiin Switzerland iska caabin ku sameeyay xulka Spain kuwaas oo maamulayay ciyaarta.
Qaybtii dambe ayuu xulka Switzerland si dar-dar leh ku bilowday iyaga oo doonayay in ay dhaliyaan goolka bar-baraha kuna soo laabtaan ciyaarta iyaga oo aan is dhiibin.
Daqiiqadii 68-aad ayuu xulka Switzerland dhaliyay goolka bar-baraha waxana u dhaliyay xiddiga Xherdan Shaqiri kaas oo ciyaarta ka dhigay bar-baro 1/1 ah oo ay labada isku mid yihiin natiijada.
Xulka Switzerland ayaa kaadhka cas looga taagay xiddiga Remo Freuler daqiiqadii 77-aad isaga oo xulkiisa kaga baxay 10 xiddig xilli xulka Spain cadaadis waali ah saaray xulka Switzerland.
Xulka Spain ayaa wax walba u sameeyay sidii ay goolal u dhalin lahaayeen laakiin Goolhayaha xulka Switzerland ayaa laf dhuun gashay ku noqday xulka Spain isaga oo sameeyay bad-baadino ka yaabsaday adduunka.
Labada kooxood ayaa isku dhaafi waayay 90-kii daqiiqo ee ciyaarta waxana lagu daray 30 daqiiqo si ay labada xul u kala baxaan oo uu midkood guul u gaadho iyada oo ay labada xul midna difaacanayay mida weerar ku jiray.
Laakiin waxa ay labada xulba ku fashilmeen in ay wax gool ah kala dhaliyaan inkasta oo uu Spain ahaa xulka fiican sidoo kale xulka Switzerland 10 xiddig ku ciyaarayeen.
Waxa la gaadhay rikoodhayaal taas oo uu xulka Spain ku gaadhay guul kadib markii ay 3 rikoodhe dhaliyeen halka xulka Switzerland laga qabtay 4 rikoodhe.
XASAASI: Xidhiidhka La Liga Oo Barcelona Ka Hor Istaagi Kara In Ay Heshiis Cusub Ka Saxiixato Lionel Messi.